Kunamata Kunongedzera Kunamata Usati Waenda Ku Embassy | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kunamata Usati Waenda Ku Embassy
Kunamata Kunongedzera Kunamata Usati Waenda Ku Embassy
Nhasi tichange tichinangana nemunamato wekutaura tisati taenda kuembassy. Kana iwe uchida kufamba kunze kwenyika, unofanirwa kunge uine pasipoti. Pasipoti igwaro repamutemo rinoratidza kuti uri mugari weNigeria. Zviri pasipoti iyi paunoenda kumuzinda kuti utore vhiza yako. Zvese zvinhu zvinofamba nenzira yekuenda kunze kwenyika kusvika wasvika padanho raunofanirwa kuenda kumuzinda kuti ubvunzurwe. Paunoteerera kutambura kwevanhu vanoda famba kunze kwenyika, iwe unozoziva kuti zvakaoma sei kuwana pasipoti yakadhindwa pamuzinda. Vamwe vashanyi vazviwanira ivo vekurima neakakurumbira mazwi ndine urombo kuti hauna kukodzera vhiza panguva ino, edza imwe nguva.
Zvichakadaro, vamwe vevanhu ava vakarambidzwa mavhiza avo vane zvese zvavanoda kuti vazviriritire parwendo asi vhiza yavo haina kumbobvumidzwa. Ngatitaurei nezve majaya nemhandara vane hupenyu munyika hwave hunosiririsa nekuda kwekuoma kwehupfumi. Ivo vanotenda kuti kune mafuro manyoro kune rimwe divi uko kwavanogona kuongorora zvizere zano ravo rakakura uye kuwedzera kugona kwavo.
Nekudaro, tariro yavo uye zvishuwo zvavo zviri kuputswa pavanosvika kumuzinda. Chinhu chimwe vanhu vasinganzwisise ndechekuti Mwari achiri mubhizinesi rekuratidza nyasha kunyangwe kana tariro yese yakarasika kare. Ndanzwa nyaya dzakasiyana dzevanhu vane mavhiza akatenderwa pavanomira vasina kana mukana zvachose uye ndakagovana muzvipupuriro zvevanhu vanoenda kunze kwenyika kuburikidza nenyasha dzeWekumusoro-soro.
Munamato uyu unozotarisa zvakanyanya pakuwana nyasha dzaMwari Wemasimbaose paunenge uchienda kumumiriri. Kana iwe uri kuronga kushanyira embassy chero nguva munguva pfupi, shandisa uyu munamato gwaro.
Ishe Mwari, ndinokutendai nechipo cheupenyu. Ndinokutendai nekuti netsitsi dzenyu handina kupedzwa. Ndinokudza Jesu nekuti ndimi mambo wemadzimambo naIshe wemadzishe ese. Zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Ishe, rugwaro runoti hatigone kuramba tiri muzvivi uye tichikumbira kuti nyasha dziwande. Ndinonamatira kuregererwa kwezvivi zvangu, munzira ipi neipi yandakatadza uye ndikakundikana nokubwinya kwako, ndinonamata kuti undiregerere muzita raJesu. Chinyorwa chinoti kunyangwe chitadzo changu chakatsvuka kuti piriviri, zvichaitwa chena kupfuura chando, kana chitadzo changu chakatsvuka kuti piriviri, zvichaitwa chena kupfuura mvere. Ndinonamata kuti mundisuke neropa renyu uye mutore huipi hwese hunogona kukanganisa minamato yangu muzita raJesu.
Ishe Jesu, pandiri kubuda nhasi kuti ndishanyire embassy, ​​ndinonamata kuti huvepo hwenyu huende neni muzita raJesu. Ishe, panotadza ruzivo rwangu, panogona kushanda simba rangu uye charisma, ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzinditaurire muzita raJesu.
Ishe, sekuonekera kwangu pamberi pevamiririri nhasi, rugwaro runoti Esteri anowana nyasha pamberi pamambo. Ndinoraira kuti iwe uchanditendera kuti ndiwane nyasha pamberi pevamiriri muzita raJesu. Ndinonamata kuti pamibvunzo yese yandichabvunzwa, ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzinditaurire muzita raJesu.
Ini ndinouya ndichipesana nemhando dzose dzekuzvidzivirira panzira yangu kuenda kumuzinda, ndinotsiura mweya yakaipa kana mifungo iri mumoyo mangu nesimba muzita raJesu. Tenzi, nzira dzese dzekunonoka dzinonditadzisa kusvika kuembassy munguva, yapfuura ndinoitsiura nesimba muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nedhimoni rekurambwa riri kushanda pandiri, ndinoparadza mweya yakadaro nemoto wemweya mutsvene. Dhimoni rese rakapika kumira munzira yangu, ndinosunungura kutsiva kwaMwari pamusoro pako nhasi muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinopesana nemweya wekukanganisa uyo muvengi angangoda kushandisa pandiri pandinotanga kupindura mibvunzo kumuzinda, ndinonamata kuti muchengete rurimi rwangu nesimba uye mhinduro yese yandichapa ichave iri zita raJesu.
Ishe, masimba ese akakonzera kurambwa kuvanhu vari pamberi pangu, ndinonamata kuti masimba akadaro arasikirwe nesimba rawo pamusoro pangu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti simba renyu rifambe pamberi pangu uye rindigadzirire nzira. Nhengo dzese dzakakasharara dzichagadziriswa muzita raJesu. Nzira dzese dzakakombama dzichagadziriswa nesimba muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti nyasha dzenyu netsitsi zvifukidze hupenyu hwangu apo pandinoonekera pamberi pemumiriri. Ndinonamatira nyasha dzinobata pfungwa dzevamiriri, ndinonamata kuti zviendeke neni nhasi muzita raJesu.
Ishe, handingatarisire kunyadziswa muzita raJesu. Sezvo ini ndiri kubuda nhasi kune embassy, ​​ndinonamata kuti ndiuye kumba ndine mufaro muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nedhimoni rega kana aritari yakakwidziridzwa kuzondikonzera kudzoka kumba nhasi ndine shungu, ndinotsiura maaritari akadai muzita raJesu. Pandinobuda nhasi, ndichave ndakunda muzita raJesu.
Ishe, ndinotenda yenyu yakapindurwa minamato. Ndinokutendai nekuti magamuchira zvikumbiro zvangu, zita renyu ngarikwidziridzwe muzita raJesu.
Chiziviso Chakakosha: Zvakakosha kuziva kuti webhusaiti haitsigire chero nzira yekutama zvisiri pamutemo. Aya minyengetero yekunamatira ndeyevaya chete vari kuenda kunze kwenyika nezvikonzero zviri pamutemo.
Previous nyayaZveMunamato Zvekutaura Usati Waenda Kunobvunzurudzwa
inotevera5 Akakosha Mhedzisiro yaGoriati muHupenyu hweMutendi
30 minamato Pfungwa Pokana neMweya weKudzokera
40 Mharidzo dzeMunamato Kudzima Denda Dzakaipa
Kuporesa minamato Yechirwere cheshuga